Wararka Maanta: Sabti, Jun 23, 2012-Qarax khasaare nafeed gesytay oo saakay aroortii hore ka dhacay Degmada Qansax-dheere ee Gobolka Bay
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka oo loo adeegsaday miino lagu aasay goob shaaha lagu cabo oo ay fariistaan saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku saugan degmadaas.
"Weerarka waxaa fuliyay guutada qaraxyada ee Al-shabaab, waxaana dhaawacyo culus ay kasoo gaareen saraakiil lagu kala magacaabo, Xasaneey iyo Cali Garabeey oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan halkaas," ayaa lagu yiri war ay soo saareen Al-shabaab.
Qaraxa kaddib ayaa waxay ciidamada dowladdu toogasho ku dileen saddex ruux oo goobta ku sugnaa, kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin Al-shabaab ayna ahaayeen kuwii ka dambeeyay qaraxa.
"Xaaladdu mar qura ayay isbedeshay, qarax weyn iyo rasaas xooggan oo daba socotay ayaa ka dhaday degmaada, waxaana aragnay dhismahada saddex wiil oo dhallinyaro ah iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda KMG ah," ayuu yiri ruux ku sugan degmada Qansax-dheere oo magaciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood.
Saraakiil DKMG ah ee ku sugan degmada ayaa beeniyay in qaraxii saakay ay ku dhaawacmeen saraakiil ka tirasn kuwa dowladda, waxayse sheegeen in hal askari uu dhaawac fudud kasoo gaaray, xaaladdiisuna ay wanaagsan tahay.
Degmada Qansax-dheere ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bay ee laga qabsaday Al-shabaab horraantii sannadkan, waxaana degmadaas ka dhaca qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ay geysanayaan rag xiriir la leh Al-shabaab.